C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay inay soo gaba gabeeyeen wajigii labaad oo ah shuruudaha Soomaaliya looga cafinayo deymaha – STAR FM SOMALIA
Koobka Adduunka ayaa ka bilaaban doona dalka Russia maanta
Sawiro: Arsene Wenger oo Tababarkii Ugu Danbeyay Geliyay Xiddigihiisa Arsenal Ka Hor Kulanka FA Cup Ee Sabtida.
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay inay soo gaba gabeeyeen wajigii labaad oo ah shuruudaha Soomaaliya looga cafinayo deymaha, isagoo caddeeyay inay ku guuleysteen dib u habeynta nidaamka maaliyadda Soomaaliya.
Wasiir Beyle oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in Bankiga Adduunka iyo Hey’adda IMF ay ku qanceen hufnaanta nidaamka maaliyadda dalka, ayna ka gudbeen wajiga labaad ee habka deyn cafinta Soomaaliya, isagoo sheegay in iminka laguda galay wajigii ugu dambeeyay ee deen cafinta oo ay horyaalaan shuruudo hor leh.
Waxaa uu sheegay in hagaajinta maamulka Maaliyadda Soomaaliya ay sababtay in Bankiga adduunka ay sanadkaan ugu yaboohaan Soomaaliya 140-milyan oo doolar, halka midowga yurubna ay ku deeqeen 100M.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay inay hubinayaan sida ay ku yimaadeen deymaha lagu leeyahay Soomaaliya, ayna la xiriireen dalalka deymahaasi sheegtay.
Waxaa uu sheegay in Mideynta canshuur qaadista hey’adaha dowladda ay qeyb ka aheyd sharuudaha deyn cafinta
“Shuruudaha ugu adag ee ugu waaweynaa waxa weeyaan inaan kordhino dakhliga wadankeena Gudihiisa kasoo xarooda”ayuu yiri Wasiir Beyle
Wasiir Beyle ayaa intaa ku daray in ciidanka iyo Howl-wadeenada safaaradaha inay hubinayaan inay akoono ku qaataan mushaaraadkooda si loo xaqiijiyo inaan lacago kaash ah gacanta lagu qaadan.
Ugu dambeyn Wasiirka Maaliyadda C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in sidoo kale la ogaan doono safaaradaha dibadda hadii ay jiraan lacago soo gala iyo halka lagu bixiyo, iyo tirada shaqaalaha ka howlgala safaaradaha Dibadda ee Soomaaliya.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa saaka loo adkeeyay si duwan maalmihii la soo dhaafay, iyadoo maalintii labaad ay tahay Ciidul Fidriga.
Ciidamo si gaar ah u tababaran ayaa saaka la dhigay waddooyin hor leh oo ka mid ah kuwa magaalada Muqdisho, waxaana meelaha qaar la diiday isu socodka dadka iyo gaadiidka.
Wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay sii xoojiyeen waddooyinkii xirnaa maalmihii u dambeeyay ee bisha Ramadaan.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa xaqiijinaya in Wafdi ka socda dowladda Itoobiya ay ku soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho.
Koontaroolada laga soo galo magaalada Muqdisho ayaa la adkeeyay, ma jirto gaadiid ka baxaya ama soo galaya.
Bishii Ramadaan ee dhamaatay ayaa magaalada ka dhicin wax qarax ah, iyadoo ciidamada amniga ay sii laba laabeen amniga magaalada, iyagoo xiray waddooyinka, hase ahaatee waxaa magaalada ka dhacayay dilal qorsheysan oo lagu tilmaamay kuwii ugu badnaa abid.
Ciyaaraha3 years ago
Cabduweli Jaamac Gorod Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka oo Gaaray Magaalada Kismaayo(Daawo Sawiro)
Gaas oo xilalkii ka qaaday Agaasimayaashii Nabadsugida iyo Sirdoonka Puntland
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 13-06-2018
Wasaaradda Ganacsiga oo mamnuucay Bastooladaha iyo baaruuda Caruurta
(Eng. Yarisow) ayaa amray in la burburiyo dhismaha Piazza Libera ee Ceelgaabta(Daawo Sawiro)
DHAGEYSO:-Barnamijka Saaka Iyo Star Fm 10-06-2018
Barnaamijyada3 years ago
DHAGEYSO:-Barnaamijka Saakay iyo Starfm 07-05-2018
DHAGEYSO;Warka Habeen Star Fm 14-05-2018